चितवनः सम्बन्धहरूको इन्द्रेणी - Action Khabar - Nepali Online News Portal
चितवनको गैँडा हात्ती, मयुरको ताँती …।
केटाकेटीमा पढेको र गाएको गीत । भरतपुर, चितवनको आकाश खुलेको छ । हुन त, दशैंपछिको शारदीय मौसम त्यसै पनि रमाइलो छ । उत्तरतिर सेताम्य हिमाल देख्दा मनै प्रफुल्ल हुन्छ । हामी नेपालीहरू सारै भाग्यमानी ! तराईको फाँटमा बसेर हिमालको दृश्यावलोकन गर्न पाउँछौँ । कहिलेकाहीँ राजमार्गबाटै जङ्गलमा गैंडा चरिरहेको देखिँदो रहेछ । यहाँ घुम्न आउनेको चहलपहल छ । यति बेला एकजना मित्रले सौराहामा घुमेको, हात्तीमा चढेर जङ्गल घुमेको, गैँडा र बाघ भेटिएको फोटो फेसबुकमा राखेका छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ? बेलुकी थारुहरूको सांस्कृतिक नृत्य हेरेको मात्र नभई, आफैँ पनि नाचेको फोटो हालेका छन् ।
चितवन विभिन्न संस्थाहरूकालागि कार्यक्रम गर्ने उपयुक्त थलो पनि हो । दशैँतिहारको बीचमा पूर्वको एउटा लघुवित्त संस्थाले यहीँ सौराहामा आफ्ना कर्मचारीहरूको भेला गरायो । यहाँ कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गर्नाका साथै जङ्गल सयर गरायो । ‘पशुपतिको दर्शन, सिद्राको व्यापार’ भनेझैँ । हालै मात्र यहाँको कविडाँडा साहित्य समाजले नेपाल–भारत साहित्य उत्सव सम्पन्न गर्यो । यस कार्यक्रमले दुवै देशका साहित्यकारहरू बीचको भावनात्मक सम्बध त प्रगाढ गरायो नै, नेपालमा प्रकाशित साहित्यिक कृतिहरू भारतमा सहज रूपमा पुर्याउनकालागि सम्बन्धित निकायलाई घच्घचाउने काम गरेको प्रतिक्रिया पढ्न पाइयो ।
सबै जना घुम्नका लागि मात्र यहाँ आउँदैनन् । जस्तै, मेरो चितवन आगमनको उद्देश्य भने स्वास्थ्योपचारसँग सम्बन्धित छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका अस्पतालको शहर पनि हो । यहाँ दुईवटा मेडिकल कलेजसँगै प्रशस्त अस्पताल छन् । यहाँ सरकारी स्तरको क्यान्सर अस्पताल पनि छ, त्यसैले यहाँ देशैभरिका सर्वसाधारण मानिस भेटिनु स्वाभाविक नै हो । म मेरा आफन्तको उपचारकालागि केही दिनदेखि भरतपुरको वी.पी.मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा छु । अझै एक महिनासम्म मेरो ‘दैनिकी’ अस्पताल र अस्पतालकै कुरुवा घर हुनेछ ।
हामी पीरव्यथाले सम्बन्ध जुराएका मानिस । तर सँगै बसेपछि दुःखसँग लड्न पनि हिम्मत जुट्दो रहेछ । महारोगसँग लड्ने हिम्मत त्यसै जुट्दो रहेछ ।
बिहान खेलकुद विकास समितिको कभर्ड हल पुग्छु, ब्याडमिन्टन खेल्न, आफ्नै शारीरिक स्वस्थताका लागि । व्यक्तिगत परिचय छैन, तर खेल्न आउने सबैसँग आत्मीयतापूर्वक अभिवादन आदान–प्रदान हुन्छ । खेलुन्जेल सबै साथी । यो खेलले बाँधेको सामाजिक सम्बन्ध ।
सम्बन्धको अर्को रूप अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको कुरुवा घरमा देख्न पाइन्छ । म बसेको घरमा १८ वटा कोठा छन् । दैनिक रु.३००। बुझाउनुपर्छ । चितवनलाई त्यसै त ७६औं जिल्ला भनिन्थ्यो, दुई वटा जिल्ला थपिएर ७७ भएपछि अब ७८ औँ जिल्ला भन्नुपर्ने भएको छ । यस भनाइलाई यस घरले पनि सार्थक बनाएको छ । यहाँ मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपाली दाजुभाइसँग भेट हुन्छ । उस्तै व्यथाले हामीलाई एकै ठाउँ भेट गराएको छ । खोतली हेरे, सबैको हृदयमा उस्तै घाउ उस्तै पीडा छ, कहिलेकाहीँ एकान्तमा आँखाबाट चुपचाप बग्ने पानीको रङ उस्तै छ । यहाँपनि आत्मीयतापूर्वक अभिवादन आदान–प्रदान हुन्छ, यहाँ बसुन्जेलका साथी । हामी पीरव्यथाले सम्बन्ध जुराएका मानिस । तर सँगै बसेपछि दुःखसँग लड्न पनि हिम्मत जुट्दो रहेछ । महारोगसँग लड्ने हिम्मत त्यसै जुट्दो रहेछ । भगवान् बुद्धले त्यसै त भनेका होइनन् नि, ‘सङ्घम् शरणम् गच्छामी ।’
बिरामी निको हुनुमा उपचारको भूमिका त हुन्छ नै, त्यसभन्दा ठूलो बिरामीमा आत्मविश्वास पनि हुनुपर्छ । जस्तो ९ नम्बर कोठाकी हिरा बहिनी ।
बोलीचालीले हामीलाई प्रष्ट छुट्याउँछ कहाँको भनेर । हामी पुर्बेली भएर होला, पश्चिमेली नेपालीले बोलेको बुझ्न गाह्रो । जस्तो नौ नम्बर कोठामा बस्ने नेपालगन्जकी हिरा बहिनीको लवज, उहाँले प्रयोग गर्ने शब्दावली बुझ्न मलाई गाह्रो छैन, तर १० नम्बर कोठामा बस्ने बैतडीकी राजमती आमाले बोलेको बुझ्न मलाई धेरै गाह्रो पर्छ, आधा मात्र बुझ्छु, उहाँले बोलेका कुरा । तर, मलाई उहाँले बोलेको सुनिरहूँ लाग्छ ।
बिरामी निको हुनुमा उपचारको भूमिका त हुन्छ नै, त्यसभन्दा ठूलो बिरामीमा आत्मविश्वास पनि हुनुपर्छ । जस्तो ९ नम्बर कोठाकी हिरा बहिनी । उनलाई देख्दा बिरामी चाहिँ तपाईँको को हो ? भनेर धेरैले सोधे रे । तर आफू नै बिरामी भएको कुरा बताउँदा सबै छक्क पर्नेे । उनी अरु बिरामीलाई यस्तो बेला कस्तो खानेकुरा खाने भनेर आफ्ना अनुभव सुनाउँछिन् । उहाँको आत्मविश्वास गज्जबको छ । ‘आफन्तहरू फोन गर्छन् अनि भक्कानिएर रुन्छन्, उल्टै मैले पो सम्झाउनुपर्छ’ हिरा बहिनीको गुनासो छ । तिहारको अघिल्लो दिनसम्म अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्नु परेकाले उनले यसपटक कुरुवा घरमै तिहार मनाइन् । उताबाट भाइ र छोरी आए । यहीँ टीका लगाउने कार्य भयो । परिवार जता भेला भयो, त्यतै रमाइलो ।
हिरा बहिनीको छोरा सुरेन्द्र काठमाडौँमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्दैछ । अहिले ऊ आमाको साथी । खाना पकाउन, कोठा सफा राख्न, आमालाई अस्पताल पुर्याउन सबै काममा अभ्यस्त भइसकेको छ । तर, उसले आफ्नो आमाको मात्र होइन, बेला बेलामा राजमती आमाको पनि ख्याल राख्नुपर्छ । राजमती आमा अहिले कोठामा एक्लै हुनुहुन्छ । नाति तिहार अघि नै घर फर्कियाे । अस्ति उहाँलाई अस्पतालमै भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने भो । बिरामीको आफन्तका तर्फबाट कागजपत्रमा सहीछाप गर्नेदेखि औषधी ल्याइदिने, अस्पतालमा रुङ्ने सबै काम सुरेन्द्रले नै गर्यो । थाहा पाएर, म पनि उसको साथी गइदिएँ । छुट्टी भएर फर्केपछि राजमती आमालाई औपचारिकतावश सन्चोविसन्चो सोधें । उदास हुनुहुन्थ्यो । सायद, घर परिवारको सम्झना आएर होला । आखिर अप्ठ्यारो पर्दा त हो आफन्तको धेरै याद आउने । न्यास्रो मेट्न उहाँ घरतिर फोन गरिरहनुहुन्छ । हिरा बहिनीको दिदी आउँदै हुनुहन्छ, सुरेन्द्रलाई पालो दिन । उसले पनि मलाई अस्पतालमा के कहाँ कसरी गर्ने भन्ने सिकाएको छ । सुरेन्द्र गएपछि राजमती आमाको ख्याल राख्ने पालो मेरो ।
८ नम्बर कोठामा अस्तिदेखि उदयपुरतिरका भाइ आएका छन् उनकी पत्नीको उपचारका लागि । उनीहरू साउनदेखि यतै रहेछन् । उपचारका लागि सुरुमा उनी यही क्यान्सर अस्पताल आएका रहेछन्, तर एकजना अपरिचित व्यक्तिले छिटो उपचार हुन्छ भनेर निजी अस्पताल पुर्याइदिएछ । दुई पटक शल्यक्रिया भयो, सफल नभएपछि यहीँ रेफर गरिदिएछ । ‘पाँच लाख रुपियाँ, त त्यतै सकियो’, उनी पछुताउँदै थिए । दशैँअघि फेरि शल्यक्रिया भयो । उनीहरू अहिले रेडियोथेरापीका लागि पालो कुरेर यही कुरुवा घरमा बसिरहेका छन् ।
प्रविधिलाई समय काट्ने र सस्तो लोकप्रिय हुने साधनभन्दा आफ्नो अनुकूल सदुपयोग गर्न पनि जान्नुपर्ने रहेछ ।
कुरुवा घरमा एउटा सानो बिरालो छ । ऊ सबैको मन बहलाउने साथी भएको छ । भोक लागेपछि कोठाकोठामा गएर म्याउँ गर्छ । सबैले खानेकुरा दिन्छन् । उसको छाक टर्छ । कोठामा छिर्न खोज्छ, जाडोले होला खुट्टाखुट्टामा टाँसिन्छ । सानो बिरालाले हामीलाई नजानिँदो तरिकाले माया गर्न सिकाएको छ, सद्भाव बाँड्न सिकाएको छ । कहिलेकाहीँ त हाम्रो गफ गर्ने विषय नै यही बिरालो बनिदिन्छ ।
बाटाबाटामा कोही नाचिरहेको दृश्य देख्नुभयो भने अचम्म नमान्नुहोस्, तिनीहरू पक्कै टिकटक बनाउनेहरू हुनसक्छन् । यस्तो दृश्य यहाँ पनि देखिनु कुनै नौलो कुरा भएन । तिहारअघि मलाई घरबाट एउटा मण्डप बनाउने चाल्नी ल्याइदिन भनियो । टिकटकबाट यहाँकी बहिनीले उक्त सामानको विज्ञापन गरेकी रहिछन् । म उनको पसलमा पुगेँ । उनका श्रीमान्ले भन्दै थिए ‘नेपालगन्जमा आज सामान पठाइदिएँ । विराटनगरकाले खातामा पैसा जम्मा गरिदिएका रहेछन्, भोलि उता पठाउनुपर्नेछ ।’ प्रविधिलाई समय काट्ने र सस्तो लोकप्रिय हुने साधनभन्दा आफ्नो अनुकूल सदुपयोग गर्न पनि जान्नुपर्ने रहेछ ।
चितवनको नारायणगढबाट करिब सात किलोमिटरमा छ देवघाट । सेती गण्डकी र कृष्ण गण्डकीको दोभानमा रहेको यो भूमि भने तनहूँ जिल्लामा पर्छ । मन्दिर नै मन्दिर भएको यो देवभूमि हिन्दूधर्मालम्बीहरूकालागि त त्यसै पनि पवित्र हुने नै भयो, त्यसैको प्रभावले होला चितवनमा हरिबोधनी एकादशी धुमधामले मनाइँदो रहेछ । साँझमा घरआँगनको तुलसी मठमा पूजा गरिसकेपछि नाच्दै टोलटोलमा भजन कीर्तन गरिरहेको दृश्य जहीँतहीँ देख्न पाइयो । तिहारमा बालिएको झिलिमिली बत्ती सोही रात बालेपछि मात्र झिकिँदो रहेछ ।
दुम्कौली नवलपरासीमा अवस्थित शाश्वत धामका बारेमा धेरै चर्चा सुनेको थिएँ । सी.जी. टेम्पल भनेर पनि चिनिने यस धाममा पुग्न चितवनबाट २५ कि.मी.को यात्रा गर्नुपर्दो रहेछ । बेलुकीपख झन् यो मन्दिर र परिसर सुन्दर देखिँदो रहेछ । नारायणगढको पोखरा बसपार्कबाट बसमा जान सकिँदो रहेछ यहाँ । सबै जना खुसी भएर घुमेको देख्दा आफूलाई पनि त्यसै रमाइलो लाग्ने ।
नारायणी नदीमा सयर गर्नेहरूकालागि बोटिङको व्यवस्था पनि रहेछ । नारायणी पुलबाट देखिने दृश्य त्यसै मनमोहक ।
शरदले बिदा मागेर हेमन्त ऋतुलाई स्वागत गरिसक्यो । बिहानबेलुका चिसो बढ्दै छ । मानिसहरू न्याना लुगा लगाएर निस्कन थाले । तर, नेकपा एमालेको महाधिवेशन यही मङ्सिरमै सौराहामा हुने समाचारले यहाँको राजनैतिक वातावरण भने तातिन थालेको छ । तपाईँलाई पनि चितवनसँग सम्बन्ध गाँस्ने मन छ ?
- ६ मंसिर २०७८, सोमबार ००:०७ मा प्रकाशित